Mpanamboatra sy mpamatsy Combatting | China Dematting Comb Factory
Fitaovana fandefasana biby azo ovaina 3 ao anatin'ny 1
3 In 1 Rotatable Pet Shedding Tool dia manambatra ny asan'ny dematting deshedding ary ny fametahana matetika. Ny volontsika rehetra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony .ary tena mateza izy ireo.
Atosohy ny bokotra afovoany ary ahodino fitaovana fanariana biby miompy 3 In 1 hanovana ireo fiasa tianao.
Ny fonosana manala dia manala ny palitao maty sy volo fanampiny amin'ny fomba mahomby. Izy io no ho mpanampy anao tsara indrindra mandritra ny vanim-potoana fandorana.
Ny borosy dematting dia manana lelany 17, noho izany dia afaka manala mora foana ny knot, ny kitrokely ary ny tsihy. azo antoka boribory ny lelany. Tsy handratra ny biby fiompinao izany ary hamirapiratra hatrany ny palitao lava volo.
Ny farany dia ny sisiny mahazatra. Io sisiny io dia misy nify akaiky. Ka manala mora foana ny dander sy parasy, tsara ho an'ny faritra saro-pady toy ny sofina, tendany, rambony ary kibo.